Fampahalalana momba ny Pharmacy Italiana ho an'ny mpizaha tany
Ny pharmaceutique italiana, na Farmacia , dia tsy mifanakalo fanafody maro tsy amin'ny fitsaboana, fa izy ireo dia manana ampihim-pototra momba ny fanafody maivan-doha toy ny aspirine sy ny famongorana - ary ireo fanafody ireo dia mety ahitana koa ny "elixirs" misy alikaola.
Ny isa sy ny fisokafan'ny toeram-pitsaboana Italiana dia fehezin'ny lalàna. Ny Pharmacies dia miasa amin'ny rafitra "rota" natao mba hikarakarana famatsiam-bola mivelatra (na iray izay afaka misokatra amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana) any amin'ny faritra ankapobeny amin'ny alina, fialantsasatra ary alahady.
Ny Pharmacy tsirairay dia mampiseho karatra misy ora fanokafana manokana, nomeraon-telefaona maimaim-poana, ary aiza no hivoaka ivelan'ny ora fanokafana ho an'ny serivisy vonjy taitra.
Ireo Pharmacists any Italie dia omena alàlana bebe kokoa amin'ny famoahana toro-hevitra momba ny fahasalamana sy fivarotana pharmaceutika noho ny any Etazonia. Raha azonao atao ny mamaritra tsara ny toe-javatra misy anao, dia mety ho azonao atao ny mividy fitsaboana mivantana amin'ny mpivaro-tena any Italia. Toy izany ihany koa, raha mila dokotera feno amin'ny fototra maika ianao, mety ho afaka manao izany ianao - raha fantatrao ny anaran'ny mpahay siansa na famerenana ny fitsaboana ilainao ary afaka manao raharaha tsara ho an'ny mpivadi-pinoana mba hialana amin'izany.
Rehefa mandeha any amin'ny Pharmacy Italiana
Ho an'ny fahasarotana madinika sy ny fanaintainana, ny hatsiaka na ny gripa, ary ny tsy fahasalamana tsy dia lehibe loatra, dia mety ho tsara ny manosika ny Farmacia eo an-toerana. Hankany amin'ny Farmacia ianao amin'ny aspirine ary na dia vitaminina aza. Ny pharmacie Italiana dia matetika mitondra fomba fitsaboana any an-toerana sy ny fiterahana.
Maro ny Italianina pharmacista miteny anglisy kely farafahakeliny, nefa raha mipetraka any Italia mandritra ny fotoana kelikely, dia azonao atao ny mianatra ny italianina .
Raha toa ianao ka mijaly kokoa noho ny aspirine, raha toa ianao ka mijaly mafy, na voan'ny kanserany, dia afaka mankany amin'ny 24 ora ora, na pronto soccorso , any amin'ny hopitaly.
Raha tsy afaka mitondra fiara ianao, dia ny 11800 no nomena ny nomeraon-telefaona maimaim-poana tsy ara-pahasalamana. Any amin'ny fiantsoana an'io nomerao io ianao dia afaka mitondra fiara mitondra marary, na tsy mila fitaterana any amin'ny toeram-pitsaboana, ny Service First Aid ( Guardia Medica ) dia alefaso.
Ny fitsaboana anao any Italia
Alohan'ny handaozanao ny fialan-tsasatra Italiana, dia maniry ny hahazoanao ampy amin'ny dokotera ianao mandritra ny diplaoma. Ankoatra izany, mba hisorohana ny olana eo amin'ilay andalana, dia te-hanaraka ireto manaraka ireto ianao:
Mitondrà fanafody ao anaty tahiry voalohany.
Mitondrà fanafody miaraka aminao ao anaty kitapo entina .
Atero ny fanafody rehetra miaraka amin'ny famaritana dokotera momba ny olana ara-pahasalamana.
Fantaro ny anarana manerantany na siantifika momba ny fitsaboana.
Ireo torohevitra farany ireo dia tena manan-danja raha mila manamboatra fanafody ianao mandritra ny dianao. Ny orinasa amerikana mpanamboatra fanafody matetika dia manome anarana an-tsoratra amin'ny dikan-tenin'ny medikaly mahazatra ary tsy voamarina hatrany ireo anarana ireo any ampitan-dranomasina.
Ny fampahalalana azonao etsy ambony dia tokony hosoratana ho an'ny mazava.
Zavatra hafa azonao atao ao amin'ny Pharmaceutical Italiana - Elixir di China
Mety ho gaga ianao mahita trondro ao amin'ny Pharmacy Italiana. Tsia, tsy miresaka momba ny andalana sy ny andian-doko aho, fa angamba misy zavatra lazaina hoe "Elixir", izay matetika dia zavatra toy ny "Elixir di China." Tsy misy ifandraisany amin'ny firenena Shina saingy miaraka amin'ny herin'ny Cinchona Calisaya izay misy quinine, ankoatra ny zavatra hafa, izay mety hanome ny toetrany "tonic" sy ny fanasitranana ho azy ireo ary manamboatra poti -kevitra ny safidy lojika amin'ny fanandramana amin'ny resipe.
Ankoatry ny herisetra, ny toaka dia (ary dia) ampahany manan-danja amin'ny pharmacopeia. Manala tanteraka azy ireo ny fitaovana iray - ary ankoatr'izay, ny rano tamin'ny vanim-potoanan'ny vanim-potoana dia tsy safidy tsara ho an'ny marary.
Ny pharmacy eo an-toerana any Italie dia mitondra ny volavolan-dry zareo China elixir, antsoina hoe Amaro Clementi, elixir di Fivizzano . Ny Farmacia Guidetti ao Bergamo dia manome ny fomba fikarakarana ny Elixir ao Shina, ary koa ny mpitari-dalana iray hisotroana azy.
Tokony hividy fiarandalamby Italiana ve aho hivezivezy any Italie?
Aiza no mandeha any amin'ny Riviera Italiana avy any Genoa mankany Cinque Terre
Inona ny Autostrada Italiana?
Ny momba an'i Poolon Springs Pool
Toeram-pisakafoanana tsara indrindra any Vancouver: Sakafo tsara indrindra
Toeram-pisakafoanana tao Toronto izay nalain'ny tambajotra sakafo
Ny antony handehanana any amin'ny faritr'i Guanacaste any Costa Rica
Selene, andriamanibavy Grika amin'ny volana
9 Zavatra tena manan-danja ao Nashville, Tennessee
Ahoana no hanararaotana ny renim-pianakaviana rosianina (na renibe)?
Ny trano fandraisam-bahiny tsara tarehin'i Shanghai
Madrid mankany Pamplona amin'ny fiaran-dalamby, bus ary fiara
FAMPIANARANA: Golden Door